भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुन्छ यी ६ गुण, तपाईमा पनि छ की ? – Dainiksamchar
HomeIntertainmentभाग्यमानी मानिससँग मात्र हुन्छ यी ६ गुण, तपाईमा पनि छ की ?
भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुन्छ यी ६ गुण, तपाईमा पनि छ की ?
October 13, 2020 admin Intertainment 3246
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन।
यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ :
अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च,
वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।।
अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ।
१. धन:सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ ।
आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थामा पनि धनको ठूलो साहारा चाहिन्छ । यसर्थ मानसम्मान, शिक्षादीक्षा, परिवारको पालनपोषण, र रोगलाग्दा उपचारको लागि धनको अति आवश्यक हुन्छ ।
२. निरोगी शरीर:जीवनमा सदैव सुखी रहनको लागि शरीर स्वस्थ हुनु जरुरी छ । यदी शरीरमा कुनै रोग छ भने तपाई राम्रो सँग कुनै पनि काम गर्न सक्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा तपाईं जीवनका हरेक कुराबाट बञ्चित हुनुहुन्छ ।
यदी तपाईंमा साना साना रोगहरु छन् भने पनि तपाईं कुनै काम राम्ररी गर्न सक्नु हुन्न । श्रम नगरी खान पाईंदैन । श्रम गर्नका लागि शरीर स्वस्थ्य हुनु पर्यो । स्वस्थ्य शरीर नै एकप्रकारले सुखी जीवन हो इश्वरको बरदान हो ।
३. सुन्दर पत्नी :महाभारतमा महात्मा विदुरले भनेका छन्, सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईंको ध्यान बाहिर भड्किदैन ।
घरमा श्रीमतीसँग हुने व्यवहारबाट तनाब मुक्त भएपछि तपाइको बाहिरीयासँग सम्बन्ध रहँदैन र अनेकौ समस्याबाट बच्न सक्नु हुन्छ । समयमा घरमा आइन्छ । आपसी छलफल र सद्व्यवहारबाट नै घर परिवार संचालन हुन सक्छ ।
४. मीठो बोल्ने: पत्नीसुन्दर त्यस पछि पनि मीठो बोल्ने श्रीमती पाउनु भनेको सुनमा सुगन्ध हो । त्यो पनि अर्को सुख हो । जसले नम्रता पूर्वक कुरा गरेर परिवारका हर सदस्यलाई सुख राख्न सक्छिन् ।
यदी नमीठो बोल्ने श्रीमती घरमा छन भने दिनहू घरमा विवाद भई रहन्छ र घरको वातावरण अशान्त हुन्छ । यसप्रकार कर्कशा श्रीमती हुनेको घरमा न परिवारले सुख पाउँछ न इष्टमित्र आउँछन् न छर छिमेकि । न उनीहरुको सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
५. आज्ञाकारी पुत्रवर्तमान: समयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सन्तान हो । सन्तान यदी गलत बाटोमा लागे भने यसको दोष बुबा आमालाई पर्न जान्छ । सन्तान विद्वान् हुन भनेको ठूलो सुख हो । त्यसैले सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि बाबु–आमाले आप्नो भएभरको सम्पत्ति लगाएर विदेशमा पठाउँछन् ।
कारण बुढेस कालमा सन्तान एकदम जरुरी हुन्छ । छोरो साथमा भएर पनि कुलतमा लागेको छ भने त्यो भने दुःखको कारण बन्दछ । तसर्थ जसको सन्तान आज्ञाकारी छन् उ सुखी हुन्छ ।
जसको सन्तान मुर्ख छ कुलतमा लागेको छ उ दुःखी । त्यसैले महात्मा विदुर, भन्छन् सज्जन सन्तान हुने जो कोहीले पनि दुख कहिल्यै भोग्नु पर्दैन ।
६. धन पैदा गर्ने:विद्यापैसा त आउँछ जान्छ यो एक नियम नै हो। कयौं पटक यस्तो पनि देखिएको छ कि कोही व्यक्ति कुनै दिन धनवान हुन्छ त केही दिनमै पैसा को लागि तड्पि रहेको हुन्छ। कोही मानिस आफ्नो भएको पैतृक सम्पत्ति अनियन्त्रित रुपले खर्च गर्छन।
यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाई सँग यस्तो ज्ञान हुनु पर्यो जसले भएको धन नष्ट पनि नहोस् र काम पनि बनोस् । यदि तपाईंसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाई त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नु हुन्छ । सम्मान पूर्वक जिवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ!
आज यी ७ राशिका लागि अति शुभ छ आजको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
आज देखि सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारले गर्यो फेरी यस्तो नयाँ निर्णय
आफ्ना बालबच्चाका अगाडि आमाबुबाले कहिलै नगर्नुहोस् यी ७ गल्ती
October 3, 2020 admin Intertainment 989
काठमाडौँ । के तपाईं बच्चाको बाबुआमा हुनुहुन्छ । तपाईकै व्यवहारको कारण तपाईको बच्चामा शारिरीक र मानसिक विकासमा असर परेको हुनसक्छ । त्यसका लागि हरेक बाबुआमा सचेत हुन जरुरी छ । धेरै बाबुआमाले बच्चालाई स्कुल लैजाँदा
September 27, 2020 admin Intertainment 3564
काठमाडौँ । भनिन्छ घरमा मनिप्लान्ट रोप्यो भने पैसाको कमी हुँदैन्। तर वास्तुशास्त्रमा उत्तम दिशामा मनिप्लान्ट राख्नु भएन भने त्यसको अर्थ रहदैन्। त्यसैले घरमा मनिप्लान्ट राख्दा वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको सानो नियमको पालना गर्नुभयो भने शुभ मानिन्छ।
समस्या नै समस्याले भरिएको हुन्छ यस्ता मानिसको वैवाहिक जीवन
October 1, 2020 admin Intertainment 762
काठमाडौँ । कुनैपनि व्यक्तिको हातमा भएको विवाह रेखाले उसको वैवाहिक जीवनको बारेमा संकेत गर्दछ । विवाह रेखाको बनावट, प्रकार, उसको प्रगतिलगायत वैवाहिक जीवनलाई समेत प्रभावित गर्दछ । पं. शिवकुमार शर्माका अनुसार विवाह रेखा सबैभन्दा सानो
LEX 18 agenda conversation: Job club (117566)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (109564)
Hello world! (109127)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (108006)
मेरो परिवार म बचाउछु, तँ आफ्नो लाज बचा सरकार ! (पूरा पढ्नुहोस) (75657)
कार्तिक १ गते देखि पुरा एक महिना लक् डाउन गर्ने (50993)
खोला तर्दै गर्दा बगेका २ सन्तान र आमालाई यी बालकले बचाए, समाचार बन्यो विश्वभर भाइरल…हेर्नुहोस् । (50538)
बाबुरामलाई नेकपाले भन्यो – ओली र प्रचण्डले घुष लिएको प्रमाण भए देखाऊ, नभए क्षमा माग्नु…अब के गर्लान् त बाबुराम ? (47044)
कम्मरबाट पेस्तोल निकाल्न नपाउँदै असई गोविन्दको ह’त्या भएको प्रहरी निष्कर्ष (38568)
पुरानो नोट बेचौ लखपति बनौं ! यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं ! (18738)